China Cement Silo Kugadzira uye Fekitori | Jusheng
Yekubatsira Cement Silo
Butterfly Valve Kune Cement Silo
Cement silos, inonziwo matangi esimende, inogona zvakare kukamurwa kuita kupatsanurwa simende silo uye yakasangana simbi simbi silo. Split silo inowanzo kuve yakakodzera kutakura yemidziyo kuchengetedza mutengo wekufambisa uye kutenderera. Cement inoshandiswa pamwe chete neinotsigira kongiri yekusanganisa simiti, uye mushandisi anotsiva simende silos nemasimba akasiyana uye huwandu maererano nezvakabuda muchirimwa chinosanganisa. Icho chimwe chezvikamu zvikuru zvekongiri yekusanganisa chirimwa. Pamusoro pekuchengetera simende, inogona zvakare kuchengeta zvinhu zvakawandisa, senge nhunzi yedota, simbi yakanaka, dhaka rakaoma, zviyo, nezvimwewo siro inongodzivirira mvura, hunyoro-chiratidzo uye maficha ari nyore kushandisa. Inogona kushandiswa nemavharufuru mavharuvhu, sikuruu conveyors, inoshanduka mawoko ekubatanidza, nezvimwewo, kutakura zvinhu kubva musiro kuenda kubheriri remeteri. Iyo silo kazhinji ine guruva muteresi uye yekumanikidza kuburitsa vharafu. , Yakakwirira uye yakaderera chikamu chejijiji, inoyerera yekubatsira yemhepo mbiya, kuburitsa gedhi butterfly vharafu, firita mudziyo uye chengetedza kabati. Yakasimbiswa kutakurwa kuve neshuwa isina guruva inoshanda nzvimbo.
Muenzaniso Nha. Kukwanisa PaShiro dhayamita Kureba kwesilo Kubuda kureba
Muenzaniso weSilo Simba rekudyara Qty pamuti
Cement silo inonyanya kugadzirwa neQ235 simbi simbi yekuchengetera simende. Iine mhando mbiri, yakakoshwa silo & welded silo, kugona kwesilo kunobva 30t-1000t.
Iyo simenti silo inosanganisira zvinotevera zvikamu: outriggers, yekuchengetedza chikuva, tank muviri, manera, guardrail, feed pombi, silo padenga guruva muteresi, kumanikidza kuburitsa vharuvhu, yakakwira uye yakaderera mwero geji, kuyerera rubatsiro gasi ndiro, kuburitsa gedhi shavishavi vharuvhu Uye chengetedza kabati
1. Iyo isina simenti silo iri nyore kuisa uye kubvisa.
2. Inogona kutakurwa uye kutakurwa nyore.
3. Simba rekuvhara chisimbiso.
4. Chitarisiko chakanaka.
Kuisirwa: Iyo simenti silo ine mahwendefa esimbi, ayo akasunganidzwa nemabhaudhi, ayo ari nyore kwazvo kuungana nekukatanura. Vashandi vane ruzivo vanogona kupedzisa kuiswa kweiyo simenti silo kuburikidza nekuisa mavhidhiyo kana mirairo yekuisa.
Unyanzvi: Iyo bhaudhi esimende silo inogona kushandiswa matani 50, matani 100, matani 200, matani 300, matani 500, matani 1000. Ukuru hwekupedzisira hwakagadzirwa zvinoenderana nenzvimbo nharaunda uye nezvinodiwa zvemuno, saka yega simende silo mhinduro yakasarudzika kumutengi.
kana uine chero mibvunzo，pls taura nesu: sales@dongkunchina.com
Yakabatana Silo Chigadzirwa Kupindirana
1. Matangi esimende anowanzo shandiswa sekutsigira zvigadzirwa zvekongiri yekusanganisa zvirimwa (zvivakwa).
2. Inokodzera kurodha simende yakawanda uye yakaoma ash ash. Iine maitiro ekudzivirira mvura, unyoro-uchapupu uye nyore kushandisa; maratidziro uye zviyero zvinogona zvakare kuitwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
3. Kazhinji inzvimbo yekutsigira yechirinda, ine midziyo yekubvisa guruva pachikamu chepamusoro kudzivirira kubuda kweguruva, uye mudziyo unotyora arch pazasi chikamu chekudzivirira hupfu kubva mukuungana uye kuita kuti hupfu hutakure zvakanaka. Iyo zvakare yakagadzirirwa nemidziyo yekuyera kuona michina, iyo inogona kudzorwa chero nguva. Kushandiswa kwezvinhu.
4. Kazhinji, hombe simende yekuendesa rori inoshandiswa kutumira iyo poda gasi musiro; zvinoenderana nechimiro chesimilo silo, kazhinji pane nzira mbiri dzekuburitsa zvinhu, imwe ndeyekubatanidza chikamu chepazasi kune chinotenderera chinotakura, uye shandisa chinotakurisa kutumira upfu muhupfu. Yechipiri ndeye kushandisa pneumatic kuendesa (kumatangi esimende ane akakosha zvivakwa).
5. Iyo simenti silo ine yakapusa dhizaini, inyore kumisikidza, diki pasi nzvimbo, yakaderera investimenti, yakasimba kufamba, nezvimwe.
6. Bolt simenti silo inogona kushandiswa matani 50, matani zana, mazana maviri, mazana matatu, mazana mashanu, mazana mashanu, matani chiuru. Saizi yekupedzisira yakagadzirirwa zvinoenderana nenzvimbo yemuno nezvinodiwa zvemuno
Otomatiki Aggregate Batching System, Otomatiki Aggregate Batching Machine, Concrete chisanganiso Spare Zvikamu, Aggregate Batching System, Automaticaggregate Batching Fertilizer Chisanganiso, Aggregate Batching Dosing Sisitimu,